Avelan’Andriamanitra hitranga ny fahoriana sy ny zava-tsarotra
"Fony tsy mbola azom-pahoriana aho, dia naniasia; Fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho." - Sal. 119:67.
men'Andriamanitra tombam-bidy ambony indrindra ny fahamasinan'ny vahoakany, ary avelanyhisyzava-tsarotrahitranga amidny isam-batan'olona, amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana, mba hahatsinjovan'ny vahoakany mialoha ny loza ka hanetry ny fony amim-pibebahana eo anatrehany izy ireo. Amim-pahalemem-panahy no hitondrany ireo izay nana. Hotolorany famelan-keloka izy ireo, ary hotafiny ny akanjom-pahamarinan'i Kristy. Homeny voninahitra amin'ny fanatrehany izy ireo. Eo amin'izao andro lehibe fanavotana izao dia adidintsika ny miaky ny fahotantsika sy mandray ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavany amin'ny famelan-keloka atolony antsika. Aoka hisaotra an'Andriamanitra isika noho ny fampitandremana izay nomeny antsika mba hialantsika amin'ny lalan-dratsy. Aoka isika hijoro ho vavolombelon'ny fahatsarany noho ny nanovany ny fiainantsika. Raha mibebaka amim-panetren-tena sy amin'ny fo mangorakoraka ireo izay nanarin'Andriamanitra sy nampitandremany noho ny faniavan'izy ireo niala tamin'ny lalan'Andriamanitra, dia horaisin'Andriamanitra indray izy ireo.
Fotoan-tsarotra lehibe no miandry antsika. Adidintsika ankehitriny ny mampiasa ny fahafaha-manao sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra ananantsika mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny hery izay nomen'Andriamanitra antsika dia natao hampiasaina hankaherezana ny hafa, fa tsy hanakiviana na hampihemorananyhafa(...) Teo amin'ny vanim-potoana nifandimby nanerana ny tantaran'ny fiangonana dia nisedra fanoherana sy fanenjehana noho ny fiarovana ny fahamarinana ireo iraka notendren'Andriamanitra. Kanefa na aiza na aiza toerana mety hanerena ny vahoakan'Andriamanitra halebany, na dia horoahina ho any an'efitra tahaka ireo mpianatra malala aza izy ireo, dia hiaraka amin'izy ireo i Kristy ary hankahery sy hitahy azy ireo, sady hofenoiny fiadanana sy fifaliana ao am-pon'izy ireo. Hodioviny ny fiangonany, tahaka ny nanadiovany ny tempoly tan in'ny fiandohana sy fiafaran'ny asany teto an-tany. Izay fisedrana sy zava-tsarotra rehetra avelany hihatra amin'ny fiangonana dia natao hitondra fahamasinana lalina kokoa sy hery bebe kokoa mba hipariahan'ny fandresen'ny hazofijaliana manerana ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Manana asa hanirahany mktfr.:aipy \_i«-nd GCB, 1 Jolay 1900. Accecez aux varan Ceesie (es 45/20